अत्यधिक गुलियो खाँदा हुने ६ हानी, तिहारमा कस्तो मिठाइ खाने ? - IAUA
अत्यधिक गुलियो खाँदा हुने ६ हानी, तिहारमा कस्तो मिठाइ खाने ?
ramkrishna October 31, 2016	अत्यधिक गुलियो खाँदा हुने ६ हानीतिहारमा कस्तो मिठाइ खाने
तिहारमा अत्याधिक गुलियो राखिएका परिकार खाने प्रचलन छ । पछिल्लो समयमा तिहारमा पकाइने परिकारमा कृतिम गुलियो राखिने भएकाले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । अत्याधिक गुलियोले गर्ने हानी यसप्रकार छन् ।
अस्वभाविक तौल बृद्धि : सम्भवत तपाईलाई थाहा होला चिल्लोले शरिरलाई मोटो बनाउँदैन, बरु अरु समस्या ल्याउँछ । तर गुलियो खाँदा केही दिनमा नै अस्वभाविक तौल बढ्छ । सुगर र परिष्किृत कार्बोहाईड्रेडले शरिरको तौल ह्वात्तै बढाउँछ । तौल घटाउन न्यून फ्याटयुक्त डाइट खानु भएको छ तर गुलियो र अन्य कार्बोहाईड्रेड खान रोक्नु भएको छैन भने तौल घट्दैन, बरु बढ्छ । गुलियोले आमाशय (गट) मा समेत अशर गरी तौल घट्नबाट रोक्छ ।
देख्दा खेरी जिब्रो नै रसाउने मिठाइमा र अन्य गुलिया परिकारमा न्यून गुणस्तर र मिसावट धेरै हुुने गर्छ । मिठाईमा प्रयोग हुने ््हानिकारक रसायन यस प्रकार छन्ः
फर्मालिनः मिठाईलाई लामो समयसम्म ताजा राख्न वा बिग्रनबाट जोगाउन मिठाइ कम्पनीहरुले फर्मालिन नाम गरेको रसायन प्रयोग गर्छन् । यो रसायन विशेषगरी लाशलाई गन्हाउनबाट जोगाउन शव गृहमा प्रयोग गरिन्छ । फर्मालिन मिसिएको परिकारले किड्नी र कलेजोलाई हानी गर्छ । यसले दम र क्यान्सर पनि निम्त्याउँछ । गर्भवती महिलाहरुका लागि यो रसायन झनै खतरनाक मानिन्छ । यस्तो रसायन मिसिएको खानेकुरा खाँदा अपांग बच्चा जन्मिने सम्भावना हुन्छ ।
स्वास्थ्य खबरपत्रिका २०७३ कार्तिक १३ शनिबार ०९:१८:०० प्रकाशित
Previous Previous post: यह अचूक उपाय कंगाल को भी बना सकता है मालामाल, कैसे? जानिए
Next Next post: साउदीको कमाइले गाउँमा घर र काठमाडौंमा जग्गा